२ School% हाई स्कूलका वरिष्ठले सोच्छन् कि स्कूलको काम हो ... | Martech Zone
२ School% हाई स्कूलका वरिष्ठले सोच्छन् कि स्कूलको काम…
शुक्रबार, जुन 1, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
Bizhack गर्न टोपी टिप!
के राख्नु भनेको घरमै रहनु हो?
शीर्ष १० स्प्यामिंग ISPs तपाइँलाई चकित पार्न सक्छ
If GHS यो लिनु पर्ने थियो, तिनीहरूले मेरो पूर्ण र अविभाज्य ध्यान पाउने थिए। जे होस्, यो कहिले हुने छैन जब श्री लसन अझै छन्।
जुन 6, 2007 मा 3: 42 PM
भूतपूर्व GHS विद्यार्थीको रूपमा मैले श्री लसनलाई बचाउनु पर्छ। पहिलो, म स्तब्ध भएँ उहाँ अझै हुनुहुन्छ। म उसको कक्षामा हुँदा ऊ बुढो भइसकेको थियो! 🙂 दोस्रो, मलाई लाग्छ कि त्यहाँ राम्रो किताबको सट्टामा वास्तवमै शोध पत्र लेखिएको छैन। इमानदारीपूर्वक, मैले उसलाई घृणा गरें - म उसलाई जुनियर र सीनियर दुवै अंग्रेजीको लागि दिएँ। जे होस्, म कलेजमा मेरा साथीहरू भन्दा अगाडि थिएँ किनकि म राम्रो ढाँचामा अनुसन्धान पत्र लेख्न सक्छु, आदि। ऊ बुढो र कडा हुन सक्छ र कुनै पनि कुराको लागि इन्टरनेट कहिल्यै प्रयोग गर्दैन - तर तपाईं कलेजमा उसलाई सराहना गर्नुहुन्छ!
अन्य पाठ्यक्रमहरूले निश्चित रूपले सिकाउन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न सक्दछन् - मलाई लाग्दैन कि तपाइँ अंग्रेजीबाट गर्न सक्नुहुन्छ।